Golaha wakiilada Puntland ayaa maanta yeeshay kulankoodii 2aad ee kal-fadhiga 47aad oo uu shalay si rasmi ah u daahfuray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iaydoona diiradda lagu saaray ajandayaasha kal-fadhiga.
Kulanka oo ay soo xaadireen 44 Mudane ayaa waxaa qodob qodob loogu codeeyey Ajandayaasha kulanka, waxaana ugu damabyn si guud ku ogolaatay 40 xildhibaan halka 4 kalena ay ka aamuseen iyadoona aysan jirin cid diidey.
Qodobada ugu muhiimsan ee kal-fadhiga waxaa kamid noqon doona la xisaabtanka xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni, doorashada aqalka sare ee Soomaaliya, ka howlgelidda xeerarka ay xukuumaddu soo gudbisey iyo arrimo kale.
Guddoomiyaha barlamaanka ayaa gabagabadii u sheegay wakiilada inay soo akhriyaan qodobo gaar ah oo ajanjadaha dood laga geliyey iyadoona maalinimada berri ah laysugu soo laaban doono.
Maalmaha soo socda ayaa lafilayaa in goluhu ay si rasmi ah u soo saaraan ajandayaasha iyo qaabka ay u kala hormari doonaan, waxaana arrintaani ku soo aadaysaa xilli shacabka il gaar ah ku hayaan barlamaanka oo ah wakiilada bulshada.